Isikhokelo samanyathelo ali-9 sokwakha iBhlog elungiselelwe ukuKhangela | Martech Zone
Isikhokelo samanyathelo ali-9 sokwakha iBhlog elungiselelwe ukuKhangela
NgoMgqibelo, Disemba 13, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Nangona sibhalile Ukubhloga ngokuDibeneyo kweeDummies malunga neminyaka emi-5 eyadlulayo, kuncinci kakhulu okutshintshileyo kwisicwangciso sisonke sentengiso yomxholo ngebhlog yakho yequmrhu.
Ngokophando, nje ukuba ubhale ngaphezulu kweebhlog zebhlog ezingama-24, ukuveliswa kwebhlog yonyusa ukuya kuthi ga kwi-30%!
Le infographic evela Yenza iBhulorho uhamba ngeendlela ezilungileyo zokuphucula ibhlog yakho ukuze ukhangele. Andithengiswanga ukuba sesona sikhokelo ... kodwa intle kakhulu.
Isiseko abasiphosileyo ekuqaleni kukuqinisekisa ukuba ubhala kwi Inkqubo yolawulo lomxholo elungiselelwe ukukhangela iinjini. Ukubhala umxholo kwiqonga elingaphantsi komgangatho yinkcitho yexesha kwaye kuya kuba yingxaki nokuba ubhala kakuhle kangakanani.
Iingcebiso zabo eziphambili kwi-infographic kukuba bhala umxholo womgangatho kwaye ubhale kakuhle. Oko kuphela akukufumani kwiziphumo zeinjini yokukhangela, nangona kunjalo. Kuya kufuneka wakhe igunya ngokuhamba kwexesha kwaye umxholo wakho kufuneka ubengcono kunokuba ulungile-kufuneka ubalasele. Ephawulekayo Umxholo uyabiwa-kwaye umxholo okwabelwana ngawo ubekwa kwinqanaba! Kukho umxholo omninzi olapha ngaphandle obhalwe kakuhle ongenakufunyanwa kwiziphumo zokukhangela!
I-infographic ikwatsho ukuba kuya kufuneka ubuncinci Amagama angama-2,000 ngeposi. Andivumi ngentliziyo iphela, eli nani ayingomgaqo kwaye ngumzekelo olungileyo wokudibana kwinto ebangelwe. Inani lamagama kwisithuba sakho soze likubeke kumgangatho. Uninzi lwezithuba zethu ziphantsi kwamagama angama-2,000 XNUMX kwaye sikumgangatho okhuphisana kakhulu.
Ndiyakholelwa ukuba abantu ababeka uphando oluninzi kunye nokucwangcisa kwisithuba esibanzi ephawulekayo unokuba nethuba elingcono lokuba lo mxholo wabelane kwaye ubekwe kwinqanaba. Ubude ayingomqhubi wenqanaba apho, ngumgangatho womxholo. Ndingakhetha iiposti ezimfutshane rhoqo kunangoku - awufuni ukudubula apho ungabhala khona ngokuchanekileyo.
Ingcebiso eseleyo iqinile-uyilo, isantya, ukuphendula, ukusetyenziswa kwemithombo yeendaba, iithegi zetayitile, ukubhaliswa kwe-imeyile, ukukhuthazwa kwezentlalo… lonke ingcebiso eqinileyo. Ngokuphathelele ukupela amagama ngendlela engeyiyo kunye neempazamo zegrama- enkosi kulungileyo abafundi bam bandixolela apho. Kwaye ukuba umbhali we-infographic ujonge ngokusondeleyo, baya kufumana upelo olugwenxa kwesinye sezihloko zabo!
Ekugqibeleni, impumelelo yebhlog yakho ixhomekeke kwinto enye kuphela: Nokuba unika okanye awuniki xabiso kubaphulaphuli bakho. Ukuba ukhona, uyakubona ibhlog yakho ikhula kwaye ityatyamba ibe sisixhobo esikhulu sokuthengisa esingena ngaphakathi kwinkampani yakho - ngakumbi kwiinjini zokukhangela. Ukuba awuboneleli ngexabiso, uza kusilela. Indlela engalunganga okanye elungileyo yokubhala ibhlog yakho iya kubaphulaphuli bakho, hayi le infographic!
tags: blog iimpazamo zegramaibhlog yokungapelwa kakuhleulungiselelo lweblogikubloga kwishishiniukubhloga kwishishinichantelleUkuThengiswa kweMpahlablog ebumbeneyokubloga kwequmrhuukubhloga ngokudibeneyo kweedummiesyenza ibhulorhodouglas karrkwi-infographicenjini yokukhangela nounukwazisa ngemidiya yoluntuamagama ebhlog post
Yintoni iSlogan? Slogans of Brands Famous kunye ne-Evolution yazo
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2014 ngo-1: 17 AM
Iposti enkulu ndiyayithanda le post.
Ngomhla wama-30 ku-Disemba 2014 ngo-10: 06 AM
Isithuba esihle esinemifanekiso emihle. Andazi ukuba uzifumene phi, kodwa zingena ngokugqibeleleyo! Umsebenzi omhle